Italy launches coronavirus “green pass”
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် The Ministry of Planning, Finance, and Industry has provided K59.498 billion to 44 microfinance companies, who will lend the approved funding to teashops and small-scale restaurants opened inasettled place across the country. The loans that the companies will provide are one-year term loans with2percent...
If you are in britain and are searching foraSugar Daddy to marry, you could havealot of options. There areahuge selection of dating sites and applications that compliment this niche market. The good thing about ...
Govt Extends Deadline for Taxes on Unassessed Income
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် The Ministry of Planning and Finance issued an order on September 22 extending the deadline for tax payment on the unassessed income for the 2019-2020 fiscal year until December 30. The previous deadline was September 30, which is the end of the 2019-2020 fiscal year. However, the Myanmar...
ချေးငွေအာမခံပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းထူထောင်ရန် ADBမှ ဒေါ်လာသန်း(၆၀)ချေးငွေရယူမည်
အသေးစား၊ အငယ်စား၊ အလတ်စားစီးပွားရေး(MSME)လုပ်ငန်းများကို ချေးငွေပေးနိုင်ရန် ဘဏ်များသို့ ချေးငွေအာမခံပေးမည့် အဖွဲ့အစည်း(Credit Guarantee Corporation)ထူထောင်ရန် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB)မှ ဒေါ်လာသန်း(၆၀)ချေးငွေရယူမည်ဟု စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းကပြောသည်။ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ စတုတ္တနှစ်တစ်နှစ်တာဆောင်ရွက်များအပေါ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ၌ ဖော်ပြချက်ရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ချေးငွေအာမခံပေးမည့် အဖွဲ့အစည်း(Credit Guarantee Corporation)သည် ချေးငွေပေးသည့် ဘဏ်များ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကို မျှဝေနိုင်ရန်နှင့် ချေးငွေများပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်ဟု ဝန်ကြီးကဆိုသည်။ CGC သည် အပေါင်ပစ္စည်းမထားနိုင်သော MSME လုပ်ငန်းများကို ချေးငွေထုတ်ချေးရာတွင် ဆုံးရှုံးနိုင်သည့် စွန့်စားမှုကို အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်ကမျှဝေခံပေးရခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်ကချေးငွေဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကို CGCက(၈၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ချေးငွေထုတ်ပေးသောဘဏ်က(၂၀) ရာခိုင်နှုန်းမှ နောင်ကာလများတွင် CGCက(၆၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဘဏ်က(၄၀)ရာခိုင်နှုန်းအထိ တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်သွားရန်...
MRF suggests 18 points for farmers
English Text Below လာမည့်မိုးစပါးရာသီမှ စတင်ပြီး စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေကို တစ်ဧကလျှင် အနည်းဆုံး ကျပ် ၂ သိန်းနှုန်းဖြင့် တိုးမြှင့် ချေးငွေထုတ်ပေးရေးအပါအဝင် အချက်(၁၈) ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ အကြံပြုထားသည်။ လယ် (၁၀) ဧကအထက်မှ (၁၀၀) ဧကအထိ ပိုင်ဆိုင်သည့်လယ်သမားများကိုလည်း မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေများထုတ်ပေးရန် နှင့် မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူများနှင့် မျိုးစေ့သန့်စင်ထုတ်ပိုးဖြန့်ဖြူးသည့် မျိုးထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက်လည်း ချေးငွေများထုတ်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ အကြံပြုထားသည်။ ယင်းပြင် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် အတွက် ချေးငွေများကို အောင်ခြေအဆင့်တွင် လွယ်ကူစွာအချိန်မီရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် စပါးအပြင်အခြား စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအား လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးရန်၊ ချေးငွေအပြင်...
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် The Department of Civil Aviation (DCA) has extended the Period of Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 August 31 meaning all the international flights to and from Myanmar will remain suspended. However, transport flights, relief flights, and special flights with the approval from the Department of Civil...